Wararka Maanta: Sabti, Aug 24, 2013-Afhayeenka AMISOM oo beeniyay in Askari ka tirsan ciidamada AMISOM uu kufsi u geystay Haweeney Soomaaliyeed
Col. Xumad ayaa sheegay in eedeyntaas ay tahay mid masabid ah oo aanay waxba ka jirin, isgaoo xusay in haweeneydaas lagu kufsaday meel ka baxsan saldhigga AMISOM, askarta AMISOM marka dalka la keenayana lasoo baro xuquuqda ay ku leeyihiin shacabka ay u adeegayaan oo ay ku jiraan waxyaabaha ay neceb yihiin iyo kuwa ay jecel yihiin.
“Kufsiga la sheegay inuu geystay askariga ka tirsan ciidamada AMISOM waa mid masabid ah oo la doonayo in lagu ceebeeyo askarteenna,” ayuu yiri Col. Xumad isagoo hadalkiisa ku daray in haweeneydaas meel aan ahayn saldhigga AMISOM lagu kufsaday ayna lana ogaan doono.
Dhawaan ayay ahayd markii la sheegay in haweeney Soomaaliyeed oo marwo ah ay xerada Maslaxa ee duleedka Muqdisho ku kufsadeen gabar Soomaaliyeed, taasoo ay si adag u cambaareysay dowladda Soomaaliya, una saartay guddi soo baara.
“Gabadha la kufsaday baa la sheegayaa, maxaa keenay in gabar qura laga soo xusho 300 illaa 500 oo haween Soomaaliyeed ah oo maalin walba lagu daweeeyo isbitaallada ay AMISOM ku leedahay dalka? maxaa haweenkaas oo dhan loo kufsan waayay?” ayuu isweydiiyay afhayeenka ciidamada AMISOM Col. Xumad.
Afhayeenku wuxuu xusay inay socdaan baaritaanno ay wadaan guddiyo loo saaray inay soo baaraan howshaas, wuxuuse ku adkeystay in ciidamadooda aysan lug ku lahayn kufsiga loo geystay haweeneyda Soomaaliyeed.
Guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan booqday gabadha sheegtay inay kufsadeen ciidamada AMISOM, iyagoo sheegay inay xaalad aad u daran kala soo kulmeen, sidoo kalena ay ka muuqata gabadha niyad-jab aad u xooggan.
Inkastoo aysan jirin warbixin cad oo kasoo baxday baaritaannada ay arrintan ku hayaan guddiyo ay saareen ciidamada AMISOM iyo dowladda Soomaaliya ayaa haddana waxaa hadalka afhayeenka uu u muuqdaa mid uu eedeyntaas uga bari-yeelayo ciidamadooda.
Dhanka kale, afhayeenka AMISOM wuxuu hadlay ammaanka Muqdisho isagoo sheegay in xalaadda ammaan ay tahay mid wanaagsan, inkastoo ay dhawaan dhacday buu yiri fal lagu weeraray siyaasad u dhalatay dalka Sweden oo lagu dhaawacay, isagoo xusay in falkaas loo qabtay dhowr qof.